शाहरुख खानका पाँच फिल्म, जुन रिलिज नै भएनन् - Medianp
शाहरुख खानका पाँच फिल्म, जुन रिलिज नै भएनन्
मिडिया एनपी २प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक २९, २०७४१४:०३1
काठमाडौं, २९ कात्तिक । शाहरुख खानलाई बलिउडका बादशाहका रुपमा चिन्ने गरिन्छ । शाहरुखलाई रोमान्स किङ पनि भन्ने गरिन्छ । शाहरुखको एक प्रोडक्न हाउस ‘रेड चिलिज एन्टरटेनमेन्ट’ समेत छ ।
अगस्ट २०१७ मा फोब्र्सले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार शाहरुख संसारका ८ औं हाइएस्ट पेड एक्टर्स मध्ये एक हुन् । यो सूचीमा उनी भारतका नम्बर वन हुन् ।
शाहरुखले सय भन्दा बढी फिल्ममा काम गरिसकेका छन् । यी मध्ये धरै फिल्म हिट छन् । एक एक्टर आफ्नो फिल्मका लागि कति मेहनत गर्छ, त्यो तपाईलाई पनि थाह छ होला । जब उसको फिल्म दर्शकसम्म पुग्दैन उसलाई के हुन्छ ? शाहरुखका पनि केही फिल्म बनेका छन्, तर अहिलेसम्म दर्शक सामु आएका छैनन् । कुनैको नाम बदलिएको छ ।
१. किसी से दिल लगाकर तो देखो
शाहरुखको यो फिल्म १९९६ मा बनेको थियो । यो फिल्ममा शाहरुखसँगै आयशा जुल्का र मधु मुख्य भूमिकामा थिए । कल्पतरुले निर्देशन गरेको फिल्ममा संगीत राजेश रोशनले दिएका थिए ।
किसी से दिल लगाकर तो देखो
२००१ मा बनेको यो फिल्ममा शाहरुख, चूही चावला र ऐश्वर्या रायको मुख्य भूमिका थियो । यो फिल्मको चर्चा धेरै भएपनि कहिलै रिलिज भने भएन ।
१९९५ मा यो फिल्मलाई सुभाष घईले बनाएका थियो । फिल्ममा शाहरुख र माधुरी दिक्षितको मुख्य भूमिका थियो । फिल्म ‘त्रिमूर्ती’ फ्लप भएपछि यो फिल्मको काम रोकियो । त्यसपछि सुभाष ‘परदेश’ फिल्म बनाउन लागे । ‘शिखर’ फिल्मलाई १९९९ मा सुभाषले नाम परिवर्तन गरेर ‘ताल’ बनाए । फिल्ममा ऐश्वर्या र अक्षय खन्नाको मुख्य भूमिका थियो ।
४. एक्सट्रिम सिटी
यो फिल्मलाई लिएर २०११ अफवाह फैलाइएको थियो । त्यो बेला शाहरुख हलिउड एक्टर लियोनार्डो डिक्रेप्रियोका साथ फिल्मा काम गर्दैछन् र निर्देशन हलिउड डाइरेक्टर मार्टिन स्कोर्सेसले गर्नेछन् भनिएको थियो । तर यो फिल्म कहिलै बनेन ।
शाहरुख खान, अयूब खान मीता बशिष्ठको यो फिल्मलाई मणि कौलले निर्देशन गरेका थिए । १९९१ ताका को यो फिल्म मुम्बई फिल्म फेस्टिवल २०१५ मा देखाइयो । तर हलमा भने रिलिज गरिएन । एजेन्सी
वैदेशिक रोजागर विभागका महानिर्देशक पाण्डे पक्राउ
One thought on “शाहरुख खानका पाँच फिल्म, जुन रिलिज नै भएनन्”
Jaya Khadka says:
2017-11-16 at 5:57 am